I-Stamplia: Thenga okanye wakhe iTemplate yakho ye-imeyile ngokulula | Martech Zone
Ukuba ujonge inkuthazo yetemplate yakho elandelayo ye-imeyile, ujonge ukuthenga itemplate ye-imeyile onokuyiguqula, okanye ujonge ukwakha itemplate ye-imeyile ephendulayo ukusuka ekuqaleni- ungakhangeli ngaphezulu IStamplia.
Banikezela ngeeleta zeendaba ezingabizi kakhulu kodwa ezintle, ii-imeyile zentengiselwano, kunye neetemplate ezikulungeleyo ukuya Magento, Prestashop ezorhwebo, I-Monitor Monitor or MailChimp. Itemplate nganye ye-imeyile inephepha lenkcazo, amanqaku, kwaye kuvavanyiwe iitoni zabathengi.
Umakhi wetemplate oPhendulayo we-imeyile
Ukurhuqa kwabo ngamandla kunye nokwehla kumakhi kuyinto entle nayo! Ukuba ukhe wakha ikhowudi kwitemplate ukusuka ekuqaleni, uyazi ukuba kunokuba nzima kangakanani ukuqinisekisa ukuphendula ngelixa ujonge okuhle kuninzi lwabathengi be-imeyile phaya!
Nantsi ividiyo ebonisa indlela elula ngayo IStamplia Tsala kwaye ulahle umhleli… kwaye bade babonelele ngeetemplate ezi-5 ukuqala ukuze kungafuneki ukuba usebenze kwasekuqaleni.
tags: Yila itemplate ye-imeyileemailumakhi weetemplate ze-imeyileitemplate ye-imeyileisitampu
Ezona ndlela zilungileyo zokuPhumeza ukuKhangela ukuKhangela ukuNgena kwiQhinga lakho lokuThengisa